by မာရိက Fairchild
အဆိုပါစကားလုံးက "မတရားသောသူ" သို့မဟုတ် "ဒုစရိုက်အပြစ်သည်" လို့ကျမ်းစာတလျှောက်လုံးပုံပေါ်ပေမယ့်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ အဘယျကွောငျ့လူမြားစှာကိုမေး, ဘုရားသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုခွင့်ပြုရသနည်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျမ်းစာစွယ်စုံကျမ်း (ISBE) သမ္မာကျမ်းစာသည်နှင့်အညီမတရားသောသူသည်ဤအချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးသည်:
"ဆိုးညစျဖြစ်ခြင်း၏ပြည်နယ်; တရားမျှတမှုများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးမစိုက်, ဖြောင့်မတ်, အမှန်တရား, ဂုဏ်အသရေ, သီလ, အတွေးနှင့်ဘဝ၌ဒုစရိုက်; စာရိတ္တပျက်ပြားမှု, အပြစ်; မှု။ "
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဒုစရိုက်အပြစ်သည် 1611 ခုနှစ်တွင် 119 ကြိမ်ပုံပေါ်ပေမယ့် ဂျိမ်းဘုရင်ကမျြးစာက , ကယနေ့မရှိသလောက်ကိုကြားတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး, သာ 61 ကြိမ်ပေါ်လာသော အင်္ဂလိပ် Standard Version 2001 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အဆိုပါတော်မူ၏ရိုးရှင်းစွာတော်တော်များများသောနေရာများအတွက် synonym တွေဟာ၏အသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။
နတ်သမီးပုံပြင်စုန်းဖော်ပြရန်ဖို့ "မတရားသောသူ" ၏အသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏လေး devalued ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျမ်းစာထဲမှာ, ဟူသောဝေါဟာရကိုတစ်ပက်ပက်စက်စက်စွပ်စွဲခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဖြစ်ခြင်းမတရားသောသူသည်တစ်ခါတစ်ရံလူမြိုးအပျေါသညျဘုရားသခငျရဲ့ကျိန်စာဆောင်ခဲ့လေ၏။
ယင်းပြီးနောက် က Man ၏ကျဆုံးခြင်း အတွက် ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ် , ကတာရှည်မယူခဲ့ပါဘူး အပြစ်တရား တစ်ခုလုံးကိုမြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ဖို့နဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်သည်။ ယင်းမတိုင်မီရာစုနှစ်များစွာ ပညတ်တော်ဆယ်ပါး , လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဘုရားသခငျသညျမှားယှငျးဖို့နည်းလမ်းတွေတီထွင်:
တဖန်ဘုရားသခင်ကလူသား၏ဒုစရိုက်အပြစ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာကြီးနှင့်သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံအစည်ရှိသမျှတို့သည်အစိတ်ကူးစိတ်သန်းအစဉ်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းကြောင်းကိုငါသိမြင်၏။ (ကမ်ဘာဦး 6: 5, တဖန်)
လူတွေကိုဘေးဥပဒ်ကိုလှည့်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဒုစရိုက်ခဲ့သည်သာ။ - ရှစ်ခြွင်းချက်အတူ - ဘုရားသခင့ဒီတော့သူကကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာရှိသမျှသက်ရှိထဲကအသုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်အခွအေနမှာစိတျနာ ကနောဧ နှင့်သူ၏မိသားစု။ ကျမ်းစာ၌အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်နောဧကိုခေါ်ဆိုသူသညျဘုရားသခငျနှငျ့အတူသှားကပြောပါတယ်။
တစ်ခုတည်းသောဖော်ပြချက် ကမ်ဘာဦး လူသားရဲ့ဆိုးသှမျးပေးသည်ကိုမြေကြီး "အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပြည့်စုံ။ " ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည် ကမ္ဘာကြီးကိုဆွေးမြေ့ယိုယွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရေလွှမ်းမိုး နောဧ, သူ့ဇနီး, သူတို့ရဲ့သားသုံးယောက်နှင့်သူတို့၏ဇနီး မှလွဲ. လူတိုင်းကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ သူတို့ကမြေကြီးတပြင် repopulate မှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
ကမ်ဘာဦး၏မြို့ကိုဖော်ပြရန်ဖို့ "ဆိုးသှမျးမှု" ကိုမသုံးပါဘူးဖြစ်သော်လည်း သောဒုံမြို့ , အာဗြဟံသည် ထိုအတူဖြောင့်မတ်ဖျက်ဆီးဖို့ဘုရားမတောင်း "ဆိုးညစျ။ " ပညာရှင်များရှည်လျားမြို့တော်ရဲ့အပြစ်များကိုပါဝင်ပတ်သက်နေယူဆကြ မတရားသောမေထုန်ကို တစ်ဦးလူအုပ်စုနှစ်ခုအထီးကောင်းကင်တမန်များမုဒိမ်းကျင့်ရန်ကြိုးစားသောကြောင့်, လောတ သည်သူ၏အိမ်တွင်ခိုလှုံခဲ့သည်။
ထိုအခါထာဝရဘုရား၏သောဒုံမြို့အပေါ်သို့ရွာစေနှင့်ကောင်းကင်ထဲကထာဝရဘုရားထံတော်မှဂေါမောရကနျ့နှငျ့မီးပေါ်မှာ; ထိုမြို့ကြီးများအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, လွင်ပြင်များနှင့်မြေပေါ်မှာကြီးပြင်းသမျှမြို့သူမြို့သားတို့နှင့်လှဲတော်မူ၏။ (ကမ္ဘာဦး 19: 24-25, တဖန်)
ဘုရားသခငျသညျအစဓမ်မဟောငျးကမျြး၌သေအများအပြားတစ်ဦးချင်းစီကိုဒဏ်ခတ်: လောတ၏မယား, ဧရ, သြနန်, အတိဟုနှင့်နာဒဒ်မင်း, ဩဇ, ဗလ, ယေရောဗောင်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတော့ အာနနိနှင့်ရှဖိ နှင့်ဟေရုဒ်အဂရိပ်ပသညျဘုရားသခငျ၏လက်မှမှာလျင်မြန်စွာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးအထက်ပါ ISBE 's ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အရသိရသည်မတရားသောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။
ကျမ်းစာ၌အပြစ်တရားသည်ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာလူသားရဲ့မနာခံမှုတွေနဲ့စတင်ခဲ့ကြောင်းသင်ပေးတယ်။ ရွေးချယ်စရာပေးထား, ဧဝက , ထို့နောက် ကိုအာဒံ , မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအစားဘုရားသခငျ့ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပုံစံခေတ်ကာလကတဆင့်ဆင်းသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လာမယ့်တမျိုးဆက်မှအမွေဆက်ခံဒါကမူရင်းအပြစ်သည်လူသားအစဉ်အဆက်မွေးဖွားကူးစက်ခဲ့သည်။
ကျမ်းစာထဲမှာဆိုးသှမျးကိုးကွယ်နှင့်ဆက်စပ်သည် အယူမှားတပါးသောဘုရား , မတရားသောမေထုန်, ဆင်းရဲသောသူကိုဖိနှိပျမြားနှငျ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်ရက်စက်မှု။
ကျမ်းစာ၌ခပ်သိမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပြစ်ရှိသောသူကြောင်းကိုသွန်သင်သော်လည်းအနည်းငယ်ယနေ့မတရားသောသူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်။ ဒုစရိုက်အပြစ်သည်, သို့မဟုတ်၎င်း၏ခေတ်သစ်ညီမျှ, မကောင်းသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်သမားများ, အမှတ်စဉ်မုဒိန်းသမား, ကလေးဗလက္နှင့်မူးယစ်ဆေးကုန်သည်တွေနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့လေ့ - နှိုင်းယှဉ်လျှင်များစွာသောသူတို့ကသီလဖြစ်ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
သို့သော် သခင်ယေရှုခရစ်တော် မဟုတ်ရင်သင်ပေးခဲ့တယ်။ မိမိအခုနှစ်မှာ တောငျပျေါဒသေနာ , သူလုပ်ရပ်များနှင့်အတူစိတ် ရှိ. မကောင်းသောအကြံအစည်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များပမာဏမှာတူညီ:
သငျတို့သရမည်မသတ်သောကြောင့်ရှေးကာလကသူတို့ကို၏ပြောဆိုစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ; နှင့်အကြင်သူသည်သတ်ရကြမည်စီရင်တော်မူခြင်း၏အန္တရာယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်: သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အကြင်သူသည်အကြောင်းမရှိဘဲသူ့အစ်ကိုနှင့်အတူအမျက်ထွက်သည်တရားသဖြင့်စီရင်၏စိုးရိမ်ရေမှတ်အတွက်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဒါက: သောသူသည်အန္တရာယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်, သူ့အစ်ကို, Raca မှပြောရမည် အဆိုပါကောင်စီ၏ကား, အကြင်သူသည်ငရဲမီးအန္တရာယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်, သင်သည်အရူးဟုပြောရကြမည်။ ( မဿဲ 5: 21-22, တဖန်)
ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့အကြီးမြတ်ဆုံးအနေဖြင့်အနည်းဆုံးဖို့, တိုင်းပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်စေတောင်းဆိုနေပြီ။ သူဟာလူသားတွေတွေ့ဆုံရန်အဘို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအလံကိုသတ်မှတ်:
သငျတို့သညျကောငျးကငျဘုံ၌မူသောသင်တို့အဘခမည်းတော်သည်စုံလင်ခြင်းရှိသကဲ့သို့, ထို့ကြောင့်စုံလင်သောရလိမ့်မည်။ (မဿဲ 5:48, တဖန်)
ဒုစရိုက်အပြစ်သည်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် ဖြောင့်မတ် ။ သို့သော် ရှင်ပေါလု , ထောက်ပြ ( "ကျမ်းစာလာသည်ကား, အဘယ်သူအားမျှဖြောင့်မတ်, အဘယ်သူမျှမဟုတျဘဲတဦးတည်း။ ရှိပါတယ်" ရောမ 3:10, တဖန်)
လူ့သတ္တဝါရှင်းရှင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ကယ်တင်နိုင်ခြင်း, မိမိတို့အပြစ်၌ပျောက်ဆုံးသွားနေကြသည်။ ဒုစရိုက်အပြစ်သည်ရန်တစ်ခုတည်းသောအဖြေကိုဘုရားသခင်ထံမှလာရပေမည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်နှစ်ဦးစလုံးဖွစျစနေို သနားတတ်သောရုံ ? သူဘယ်လိုနိုင်ပါတယ် ခွင့်လွှတ် သည်သူ၏ပြီးပြည့်စုံသောသနားခြင်းကရုဏာစိတ်ပြေစေခြင်းအပြစ်သားများသေးသည်သူ၏ပြီးပြည့်စုံသောတရားသဖြင့်စီရင်ကျေနပ်ဖို့ပြုသောအဓမ္မအမှုကိုစစ်ကြောတော်မူ?
အဖြေခဲ့တယ် ကယျတငျတျောမူသောဘုရားသခငျသညျအစီအစဉ် , မိမိအသာသားတော်ယေရှုခရစ်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် ကမ္ဘာ၏ဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုမများအတွက်။ တစ်ခုသာအပြစ်မဲ့လူကိုထိုကဲ့သို့သောယဇျပူဇျောဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုငျဘဲ, ယရှေုသညျသာအပြစ်မဲ့သူဖြစ်၏။ သူက ပြစ်ဒဏ်ကိုယူ အားလုံးလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အပြစ်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားကသူ၏အတည်ပြုကြောင်းပြသ သည်ယေရှု၏ ငွေပေးချေမှု အားဖြင့် သေခြင်းမှသူ့ကိုပြုစုပျိုးထောင် ။
ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စုံလင်သောမေတ္တာအတွက်, ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုနောက်လိုက်ဖို့မည်သူမဆိုအတင်းမထားဘူး။ ကျမ်းစာ၌အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုလက်ခံရရှိသူကိုသူတို့သာကသှ ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစား သွားပါလိမ့်မယ် , ကောင်းကင်ဘုံ ။ သူတို့သညျယရှေုကိုယုံကြည်သောအခါသူ၏ဖြောင့်မတ်သူတို့ကိုအပြစ်ရှိသည်ဟုမှတ်နှင့်ဘုရားသခင်ကဲ့သို့မတရားသောသူသည်, ဒါပေမယ့်အဘို့သန့်ရှင်းသူတို့ကိုမကိုမြင်သည်။ ခရစ်ယာန်တွေကိုပွစျမှားသောကိုရပ်တန့်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့အပြစ်ရှိသောကြောင့်ယေရှု၏, အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ်မှလွှတ်နေကြသည်။
ယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏တငြင်းပယ်သူတွေကိုကြောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာသတိပေးခဲ့သည် ကျေးဇူးတရား ကိုသွား ငရဲ သူတို့သေဆုံးတဲ့အခါမှာ။
သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ပေးသည်။ သိန်လျစ်လျူရှုမထားဘူး, ကကရာနီ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ငရဲအတွက်နောင်တမယူသဖြင့်ဖြစ်စေဘို့ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်သောသတင်း, အအဆိုအရ ဧဝံဂေလိတရားကို ဘုရားသခငျ့ခှငျ့လှတျခွငျးလူတိုင်းမရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခငျသညျလူအားလုံးသူ့အားလာလို။ ဒုစရိုက်အပြစ်သည်၏အကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားရန်တစ်ဦးတည်းလူသားတွေအဘို့မဖြစ်နိုင်သော်လည်း, ဘုရားသခင်နှင့်အတူ, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။
> နိုင်ငံတကာစံသမ်မာကမျြးစွယ်စုံကျမ်း, ယာကုပ် Orr, အယ်ဒီတာ။
ခွင်ျသေ့ Den ဒံယေလ၏ပုံပြင်
ယရှေုသညျ (: 13-19, Mark 3) ကျိပ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်တောင်းဆို
ယရှေုသညျမုန်တိုင်း (: 35-40, Mark 4) Calms
ဂျေရုဆလင်: ယေရုရှလင်မြို့၏ပရိုဖိုင် - သမိုင်း, ပထဝီ, ဘာသာရေး
Serial Killer Velma Margie Barfield ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
ဘယ်လို Daffynition နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုပါသလဲ?
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ 10 Snarkiest ဘလော့များ
PGA Tour ဝဲလ်တဖက်ချန်ပီယံရှစ်
အဆိုပါရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ: Arsuf ၏တိုက်ပွဲ
ငါယနေ့တွင်အတန်းအစားကိုသွားပါသငျ့သလော ဤတွင်ဒါဟာကောင်းမွန်သော Idea ရဲ့ 17 အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်
စာရင်းစစ်အမှားသင်ဟာ Make မှမတတ်နိုင်
အဆိုပါ Value ကိုနှင့်ပန်းချီနှင့် Drawing များတွင်ရောစပ်၏နည်းစနစ်ကိုလေ့လာပါ
အဘယ်ကြောင့် Do ခြ Follow မှင်လူ့?
ထိပ်တန်း 10 ကွန်ဆာဗေးတစ်မဂ္ဂဇင်းများ
Shantarakshita & ဆယ်ပါး-တစ်ထောင်အရာ: ပြောဆိုသည်နိုင်အဆိုပါ Tao က